Streamingkpụrụ gụgharia Live na Statistics | Martech Zone
Otu n’ime ọrụ anyị n’afọ a bụ iwupụta a ndụ-gụgharia oche anyị Podcast studio. Anyị nwere ike iji otu ngwa ọdịyo rụọ ọrụ mgbe anyị na-agbakwunye vidiyo. Ngwa akụrụngwa vidiyo na-agbadata na ọnụahịa na ọtụtụ nchịkọta na-amalite ịpụta site na ụlọ ọrụ vidiyo-ndụ maka ijikwa obere ụlọ ọrụ. Anyị na-atụ anya inweta ma ọ dịkarịa ala igwefoto 3 na sistemụ maka ijikwa ụzọ atọ n'ụzọ atọ na ntinye vidiyo site na desktọọpụ ma ọ bụ sọftụwia ọgbakọ.
Nkuchi mmalite nwere ihe ize ndụ nke nnukwu ụgwọ na ngwa ngwa ngwa ngwa, mana uru nke nnabata ahịa ahịa. Enwere m olileanya na anyị anaghị echere ogologo oge, mana ogologo oge iji wee nwee ike iji teknụzụ dị ịtụnanya na-emepe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso onye na ntanetị nke nwere teknụzụ teknụzụ dị ndụ na-asọ asọ, hụ na ị ga-eso Joel Comm. Ọ na -ekere òkè niile ọhụrụ na kasị ukwuu na nyiwe na akụrụngwa.
Yabụ kedu ebe anyị nọ na-ebi ndụ taa? Ọ na-agbapụ na uto ma nwee ike ịga n'ihu n'okporo ụzọ nnabata karịa ọtụtụ ndị chere. E nwere isi egwuregwu ise na - egwu mmiri na - egwu egwu n'ọhịa dịka mmepe nke ihe omuma a, nke ọ bụla nwere uru dị iche iche:
Facebook Ndụ - Ihe karịrị ndị ọrụ 360 na-ekiri Facebook Live anya… ma buru n'uche na Facebook ifịk ifịk ịmanye ndụ video, na-amịpụta a ton nke echiche ma m na-ajụ ụfọdụ nke njikọ ọnụ ọgụgụ. A na-elele vidio dị okpukpu atọ karịa ọdịnaya vidiyo ndị ọzọ na ndụ na-enye ohere mmeghachi na mkparịta ụka na ezigbo oge yana ikike ịghaghachi vidiyo ahụ emesia. Facebook na-akpa nkata ndị ọrụ na ya Maapụ Live Facebook yabụ ị nwere ike ịchọta iyi-ewu ewu na mpaghara. Facebook Live dị ugbu a site na ekwentị, desktọọpụ, na ibe.
Akụkọ Live Instagram - Ihe dị ka nde mmadụ 200 na-ekiri ya mgbe niile Instagram dịrị ndụ. Ndị na-ekiri nwere ike itinye aka na ezigbo mmasị na nkwupụta. Ndị na - eme ihe nwere ike ịhọrọ ịkọpụta ihe maka ndị niile na - ekiri ha ka ha hụ. Akụkọ dị ndụ dị site na oke akụkụ nke ngwa ahụ ma enwere ike ịchọta akụkọ ọhụụ site na Top Ndụ ngalaba na ịchọpụta taabụ. Instagram wepụrụ obere ego na Snapchat, na-ebelata uto ha site na 82% mgbe ị mimomiri atụmatụ ndụ ndụ Snapchat.
Youtube Ndụ - Mgbe ihe karịrị otu ijeri mmadụ na-eji Youtube, ekwetaghị m Live Youtube ahuru ka a -elekọta mmadụ ndụ-gụgharia ebe a. Live gụgharia bụ naanị maka kwupụtara ọwa na ịnyịnya mobile iyi iyi dị naanị mgbe ị nwere 1,000 debanyere aha. A na-aza ajụjụ oge niile na Super Chat na-enye ndị na-ekiri ha ụzọ iji gosipụta ihe ha kwuru n'oge mgbasa ozi ha. Ihe omume Live Youtube na-akwado ọtụtụ ese foto ma nwee ike ịhazi ya n'ahịa.
tuwichi - tuwichi na-achịkwa ahịa egwuregwu ebe ndị 9.7 nde ndị ọrụ kwa ụbọchị na-eji minit 106 elele mmiri iyi kwa ụbọchị na nkezi. Oge na-ekwu na emoticons dị na windo nkata. Ndị ọrụ ntanetị nwere ike ịgafe-kwalite iyi ndị ọzọ mgbe ọwa gị na-anọghị n'ịntanetị site na iji Ọnọdụ ọbịa. Enwere ike ịzụta Bit Emoticons ka ndị Fans wee nye ndị ọzọ onyinye.
na-adị ndụ - 6 nde ngụkọta ọrụ na-ele ọdịnaya kwa ọnwa na na-adị ndụ., ngwa mkpanaaka site na musical.ly. Ndị ọrụ nkezi na-etinye oge atọ kwa ụbọchị na ngwa ahụ, ma ọ bụ ihe dịka nkeji 3.5 kwa ụbọchị. Atụmatụ gụnyere nkọwa oge na "emoji-n'anya". Nhọrọ nke ndị ọbịa na-enye ndị na-ebi ndụ mmiri ohere ịgụnye Fans dịka ndị ọbịa na mgbasa ozi. Fan-zụtara mebere onyinye na akara ngosi nwere ike itinye na-ekwu na-anọgide na ihuenyo ogologo.
Lelee ihe omuma ihe omuma site na Koeppel Direct, Nbili nke Live Live: Redefining Njikọ oge-oge.
Tags: facebook na-adị ndụinstagram ebiebi ndụndụ gụgharia njikọ akandụ gụgharia ọnụ ọgụgụna-adị ndụna;musical.lytuwichindụ youtube